मुख्यमन्‍त्रीको घोषणा कार्यान्वयन भएन
'मैले लामो समयदेखि भारतमा रहेर चौकीदारीको काम गरेको छु । कामको सिलसिलामा भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको अवस्था र उनीहरूले भोगेका पीडाका बारेमा पनि मलाई राम्रो ज्ञान छ । त्यसैले म सबैभन्दा पहिला भारतमा काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ उनीहरूले पाउने दुःख न्यूनीकरण गर्ने छु ।' प्रदेश-७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन्द भट्टले मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गरेकै दिन गरेको प्रतिबद्धता हो यो।
प्रकाशित: २०७५-०४-९ १०:१७:२१ शिवराज खत्री
धनगढी- 'मैले लामो समयदेखि भारतमा रहेर चौकीदारीको काम गरेको छु। कामको सिलसिलामा भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको अवस्था उनीहरूले भोगेका पीडाका बारेमा पनि मलाई राम्रो ज्ञान छ। त्यसैले म सबैभन्दा पहिला भारतमा काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ उनीहरूले पाउने दुःख न्यूनिकरण गर्नेछु।’ प्रदेश-७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सपथग्रहण गरेकै दिन गरेको प्रतिबद्धता हो यो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अल्पकालीन बजेटमै भारतीय भूमिमा रोजगारीका लागि जानेहरूको तथ्यांक राख्न यस प्रदेशसँग सीमा जोडिएका हरेक नाकामा डेस्क स्थापना गर्ने भट्टले घोषणासमेत गरेका थिए। ६ महिनाको अवधिमा कुनै पनि सीमामा डेस्क स्थापना गरिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विसनसिंह थापाले भारत जाने नेपालीको तथ्यांक संकलनका लागि नाकामा डेस्क स्थापना गर्नेबारेमा कुनै छलफल नभएको बताए।
प्रदेश-७ को अल्पकालीन बजेटमार्फत् भारत जाने नेपाली कामदारका बारेमा अध्ययन गर्न पाँच लाख छुट्याइएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् खर्च गरिने उक्त बजेट भारत जाने नेपालीको तथ्यांक संकलनमा खर्च गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले जानकारी दिए। तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक संकलनको जिम्मा पाएको निकायले रिपोर्ट बुझाउन ढिलो गरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको उनले बताए। 'अध्ययनबाट आएको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरी भारतमा रहेका नेपाली कामदारको समस्या पत्ता लगाउने काम हुने छ,’ खड्काले भने। मुख्यमन्त्री भट्टले भारतमा कामदारका रूपमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीलाई सुरक्षित र जोखिमरहित बनाउने र विस्तारै स्वदेशमै कामको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उनले विभिन्न कार्यक्रम तथा सभालाई सम्बोधन गर्दा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने गरेका थिए। यति मात्र होइन, भारत जाने र आउने हरेक नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण नाकामै गरिने पनि मुख्यमन्त्री भट्टले घोषणा गरेका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीका ती घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
'कामका लागि भारत जानेहरूको संख्या निकै उच्च छ,’ स्थानीय केशव चन्दले भने, 'त्यसतर्फ मुख्यमन्त्रीले खासै ध्यान दिन सकेको पाइएन।’ चर्चामा आउन मात्रै त्यस्तो घोषणा गरेको उनले आरोप लगाए। नेपालीले भारतका न्यून ज्यालामा श्रम गर्नुपर्ने तथा ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने अवस्था छ । कामका लागि भारत जाने-आउने क्रममा मात्र सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने त्यतिकै संख्यामा बेपत्ता छन्।
ट्रमा कर्नर स्थापना गर्दै प्रदेश सरकार
जनताको पक्षमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेन : उपसभापति निधि
कुन देशसँग कति सुन?
कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या एकै दिनमा दोब्बरः दक्षिण कोरिया
बागमती प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना खुल्दै
एक सातामा साढे ८ अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार
मिका सिंहकी म्यानेजरको रहस्यमय मृत्यु
१ जनकपुरमा सुरु भयो खाद्य मेला
२ ट्रमा कर्नर स्थापना गर्दै प्रदेश सरकार
३ जनताको पक्षमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेन : उपसभापति निधि
४ कुन देशसँग कति सुन?
५ मिका सिंहकी म्यानेजरको रहस्यमय मृत्यु